Otu esi emepụta ntolite Google News - Ntuziaka di mfe
Alerts Google: Ihe Ha Bụ, Otu esi eme otu
Jide ozi gbasara gị, n'achọghị ya
Achọrọ ịdebe otu isiokwu ma nwee ihe ọmụma niile nke na-agbapụta na akụkọ a na-enye gị n'oge ọ bụla na oge ọ bụla i depụtara? Ị nwere ike ime nke a n'ụzọ dị mfe site na Google Alerts, ụzọ dị mfe ịmepụta nnyefe akpaka na onwe gị na isiokwu ọ bụla ị nwere ike ịmasị.
Dịka ọmụmaatụ, kwuo na ịchọrọ ka amara gị mgbe ọ bụla a na-akpọ aha egwuregwu a ma ama n'Ịntanet. Kama iwepụta oge ịchọ onye a mgbe ị na-echeta - enweghi ike ịchọta ozi naanị n'ihi na ị chefuru - ị nwere ike ịmepụta ndepụta mgbasa ozi na-akpaghị aka nke ga-akụdo Weebụ maka okwu ọ bụla nke onye a, ma nyefee ha ikike ị. Nanị mgbalị ị ga-eme ga-abụ nanị ịmalite ịmụrụ anya ma mezie akụkụ gị.
Esi tinye ntuziaka Google
Lee otú o si arụ ọrụ. Na-agagharị na ntanetị weebụ Google ma tinye okwu ọchụchọ. Ị kọwapụtara isiokwu ahụ site na ịtọ nọmba ọ bụla na nkebi ahịrịokwu nke weghachite ụdị ozi ị chọrọ.
Ọzọ, họrọ Gosi Nhọrọ iji dozie:
Ugboro ole ka ịchọrọ ịnweta ọkwa gị;
Asụsụ ịchọrọ ịchọta ozi;
Ụdị weebụ ịchọrọ ịchọrọ na njikere;
Kedu mpaghara ị chọrọ gụnyere na njikere;
Adreesị ozi-e ị ga-achọ ịnweta ọkwa ndị a na.
Ozugbo i mechara họrọ nhọrọ a chọrọ, pịa Mepụta Alert ka ịtọọ anya ma malite ịnata ozi ịntanetị akpaka na isiokwu ị họọrọ.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ịchọrọ onye ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-ekwu okwu ya mgbe niile, kwadebe maka ọtụtụ ozi na igbe mbata gị; ọ bụrụ na ị na-achọ onye nwere ike ịbụ na a kpọghị ya aha dị oke, nke ahụ bụ eziokwu.
Google ga-ezite ozi nchịkọta akụkọ ugbu a ị họrọla na igbe mbata gị, na ọnụego ị chọrọ, site n'otu ugboro n'ụbọchị, otu ugboro n'izu, ma ọ bụ ka akụkọ ahụ mepụtara. Google nwere ike inweta ọtụtụ puku isi mmalite nke akụkọ, na mgbe ị chọrọ ọtụtụ ebe na otu isiokwu, Google na-enyefe mgbe niile.
Ozugbo ị malitere Google Alert, ọ na-amalite na-arụ ọrụ ozugbo. Ikwesiri ịmalite ịhụ ozi na igbe ozi emelị gị n'oge ọ bụla ị kwadoro (ọtụtụ ndị na-ahọrọ kwa ụbọchị, ma ọ bụ kpamkpam nye gị otu esi esi rụọ ọrụ ngosi gị). Ugbu a, kama ịcheta ịchọ isiokwu a, ị ga-enweta ozi ezitere gị na akpaghị aka. Nke a bara uru karịsịa maka ụdị ọnọdụ ọ bụla; nyochaa otu isiokwu a na-emelite, na-agbaso onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ mmemme ntuli aka, wdg. Ịnwere ike ịmalite ịmalite ịkọrọ gị oge ọ bụla aha gị na-ekwu okwu site na akụkọ ma ọ bụ weebụsaịtị; ọ bụrụ na ị nwere ụdị profaịlụ ọhaneze, nke a nwere ike ịbịaru aka ma ọ bụrụ na ị na-agbali ịmepụtaghachi ma ọ bụ na ị ga-achọ ịdebe ihe ndekọ ọha gị na akụkọ, magazin, akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na ntanetị.
Google amalitewokwa inye aro maka isiokwu ndị na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịmasị ịtọ ntọala maka na ịgbaso; ihe ndị a bụ site na ego maka ụgbọala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Health. Pịa nke ọ bụla n'ime isiokwu ndị a, ị ga-ahụ ọkwa nke ihe nhazi / nhazi gị nwere ike ịdị ka ya. Ọzọkwa, ị nwere ike ezipụta ugboro ole ị ga - achọ ịhụ ozi a, site na isi mmalite ndị ịchọrọ ịchọta iji nweta, asụsụ, mpaghara mpaghara, àgwà nke nsonaazụ, na ebe ị ga - achọ ka a nyefee ozi a (adreesị ozi ịntanetị).
Gịnị ma ọ bụrụ na m chọrọ ịkwụsị Google Alert?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ịgbaso Google Alert:
Gaa na peeji nke Google Alerts ma banye ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Chọta ndepụta ị na-eso, ma pịa akara trashcan .
Ozi nkwenye na-egosi na elu nke ibe ahụ na nhọrọ abụọ:
Wepụ : Pịa nhọrọ a iji wepụ ozi nkwenye ahụ.
Wepụ : Pịa nhọrọ a ma ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị ma chọọ iweghachite nhichapụ ehichapụ na listi Alerts gị. Nke a ga-eweghachi anya na ntọala mbụ gị.
Alerts Google: ụzọ dị mfe ịchọta ma soro isiokwu ndị ị chọrọ
Alerts Google bụ ụzọ dị mfe iji mee ngwa ngwa ọ bụla isiokwu ị nwere ike ịmasị. Ha dị mfe ịtọlite, mfe ịnọgide na-enwe, na nnọọ vasatail.
OneLook - Achọ Ngosi maka Okwu na Ikwu
Esi Chọta, Jikwaa, ma hichapụ Akụkọ Ọchụchọ Gị
Kedu ihe bụ agbụrụ?
The Top Five Scams Online na Otu esi zere ha
Kedu ihe bụ Pinterest?
Ebe Ntanetị kachasị mma
Esi eji MapQuest maka Nduzi uzo
Chọọ dika Google Ninja
Otu esi edezi foto n'ime Google site na iji kpochapu Creative
Olee otú iji gbochie oku na ederede na iPhone
Otu esi gbanye ma gbanyụọ Bluetooth na iPad
Esi weghachite iPod Touch
Otu esi zipu ozi sitere na adreesị ozi-e omenala na Gmail
Otu esi eziputa faịlụ gị na ihe mere i ji kwesị
Ndị na-ekpo ọkụ HDMI - Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Egwuregwu PC PC - Njikọ
Kedu ka m nwere ike isi mepee ngwa ngwa maka ngwa igwefoto?
Gbanyụọ Akwụsị: nkuzi LG G Flex 2 Cover Cover
Nyocha - Wii Game Review
Emelitere 15-anụ ọhịa MacBook Pros na 27-anụ ọhịa Retina iMacs
Esi Email Weebụ Email na iPhone, iPod aka, na iPad
Esi tinye ngwa ngwa na Windows Email
IOS 4: Isi ihe
Nyocha Ezigbo Nyocha System nke Ụlọ Nzuzo Nile
Zụlite Environment Desktop Enlightenment - Nkebi nke 2
Otu esi gbanwee ihu igwe gị
Otu esi esi nweta ntanye vidiyo na weebụsaịtị
Esi Wụnye ma jiri Skype maka PSP
Olee otú bulite gị weebụsaịtị Iji FTP